China Oxygen Generator Hospital Oxygen Generator Medical Oxygen Generator Akụrụngwa ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ngwaahịa | Ma ọ bụ
Medical Oxygen Generator Hospital Oxygen Generator Medical Oxygen Generator Akụrụngwa
Anyị na-arụpụta PSA oxygen osisi site na iji teknụzụ kachasị ọhụrụ nke PSA (Pressure Swing Adsorption). Bụ onye ndu PSA oxygen osisi na-emepụta, ọ bụ ụkpụrụ anyị iji nye ndị ahịa anyị ikuku oxygen na nke kwekọrọ n'ụkpụrụ ụwa ma ọ bụ ọnụ ahịa asọmpi. Anyị na-eji ihe eji adịchaghị mma nke a zụtara n'aka ndị ahịa kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ. Oxygen mepụtara na PSA generator anyị na-ezute ihe ndị achọrọ maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ngwa ahụike. Ọtụtụ ụlọ ọrụ si gburugburu ụwa na-eji osisi oxygen anyị PSA ma na-ewepụta oxygen na saịtị maka ịrụ ọrụ ha.
A na-ejikwa igwe ikuku oxygen anyị n'ụlọ ọgwụ n'ihi na ntinye nke ikuku gas oxygen na saịtị ahụ na-enyere ndị ụlọ ọgwụ aka ịmịpụta ikuku nke onwe ha ma kwụsị ịdabere na oxygen cylinders zụtara n'ahịa. Ndị ọrụ ikuku oxygen anyị, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụike nwere ike ịnweta ikuku oxygen na-adịghị akwụsị akwụsị. Companylọ ọrụ anyị na-eji teknụzụ na-egbutu ọnụ na-arụ ọrụ ikuku oxygen.
Salient atụmatụ nke PSA oxygen generator
Ezubere usoro akpaghị aka iji rụọ ọrụ na nche.
Osisi PSA nwere kọmpat na-ewere obere ohere, mgbakọ na skids, prefabricated ma nye ya site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Oge nbido ngwa ngwa na-ewere naanị nkeji 5 iji mepụta oxygen na ịdị ọcha chọrọ.
A pụrụ ịdabere na ya iji nweta oxygen na-aga n'ihu ma na-adịgide adịgide.
Durable molekụla sieves na-adịgide ihe dị ka afọ iri na abụọ.
Nke gara aga: Top mma PSA oxygen osisi maka ire ọkụ na ndịda America ọwụwa anyanwụ Asiawith mma obi ike nke elu arụmọrụ
Osote: Industrial High centta Psa Oxygen Generator PSA Oxygen Plant
Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ọgwụ
Obere Ogwu Ogwu Ogwu oxygen
Nkọwapụta Nkọwa (Nm³ / h) Nri oriri gas (Nm³ / h) usoro nhicha ikuku ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Oxygen bu gas di nkpa iji kwado ndu n’ime ụwa, pụrụ iche n'ụlọ ọgwụ, ọgwụ oxygen p ...
Industrial High Conta Psa Oxygen Genera ...
Nkọwapụta Nkọwa (Nm³ / h) Nri oriri gas (Nm³ / h) usoro nhicha ikuku ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 A na-emepụta ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 PSA oxygen generator a na-eji akwa Pressure Swing Teknụzụ mgbasa ozi. Dị ka nke ọma-k ...